Fluid mechanics သည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်မီဒီယာ၏စက်ပြင်နှင့်စက်ပြင် ဘာသာရပ်များတွင် အဓိကကျသော ဘာသာရပ်များဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာသင်တန်း. ကျွန်ုပ်တို့ ကမ်းလှမ်းသည့် သင်တန်းသည် fluid mechanics နှင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများ၏ အထွေထွေလေ့ကျင့်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက် သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင်သင်ကြားရန်အတွက်လည်း အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။
fluid mechanics ၏အခြေခံများနှင့် ပတ်သက်၍၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအပေါ် များစွာ အခိုင်အမာတောင်းဆိုပါမည်။ စီးဆင်းမှု၏အခြေခံညီမျှခြင်း အရည်များနှင့် စီးဆင်းမှုများ၏ သဘောသဘာဝအပေါ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဇစ်မြစ်များ၏ ယူဆချက်များဖြင့် ဖြည့်စွက်ထားသော စက်ပြင်နှင့် ရူပဗေဒဆိုင်ရာ အခြေခံမူများကို အသုံးပြု၍ သိသာထင်ရှားပါသည်။
အာရုံစိုက်ပါမည်။ ညီမျှခြင်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ် ခိုင်မာသောကိစ္စများတွင် ၎င်းတို့ကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဟိ လျှောက်လွှာများ fluid mechanics သည် မော်တော်ယာဥ်၊ လေယာဉ်ပျံ၊ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၊ ဓာတုဗေဒအင်ဂျင်နီယာ၊ ဟိုက်ဒရောလစ်၊ မြေအသုံးချမှုအစီအစဉ်၊ ဆေးပညာစသည်ဖြင့် မြောက်မြားစွာရှိသည်။
fluid mechanics အတွက် ဤပထမချဉ်းကပ်နည်းအတွက် သင်တန်းကို ကန့်သတ်ပါမည်။ အမြဲတမ်းစီးဆင်းနေသော အရည်များကို စုစည်း၍မရနိုင်ပါ။. အရည်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် မီဒီယာအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။ ခေါ်သွားမယ်။ အမှုန်သင်္ချာဆိုင်ရာဖော်ပြချက်တစ်ခုအတွက် အကန့်အသတ်မရှိသေးငယ်သောပမာဏရှိသော ဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည့် မော်လီကျူးများနှင့်ဆက်စပ်၍ ကြီးမားသောပမာဏဖြစ်သည်။
အရည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ မိတ်ဆက် ဒီဇင်ဘာလ 18, 2021Tranquillus
အောက်ပါArtificial Intelligence... ဉာဏ်ရည်ဖြင့်။
စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏အုတ်မြစ်များ - ဘတ်ဂျက်